Andrarezin’ny teatra: nanome ny tsara indrindra ny tropy Jeannette | NewsMada
Zavakanto miaina sy afaka mifanaraka tsara amin’ny fivoarana misy ankehitriny ny teatra. Noporofoin’ny tropy Jeannette izany, ny zoma hariva teo, nandritra ny fitondrana an-tsehatra ilay piesy mitondra ny lohateny hoe « Ny voromailala », tetsy amin’ny Arena Ivandry. 90 taona ny tarika, izany hoe izy ny zokiny indrindra amin’ireo mpanao teatra eto amintsika, saingy mipetraka hatrany ny talenta, ampian’ny traikefa, izay nampitain’ireo zoky amin’ireo tanora ao anatin’ny tropy, ankehitriny.
Efa tany amin’ny taona 1942 tany ny nanoratan’i Rosa Beby ny « Ny voromailala », tantarana tovovavy iray, zanaka mpanefohefo, noteren-drainy hanambady tovolahy tsy nandrian’ny fony akory. Na efa ela toy izany aza ny nanomoronana ny tantara, hain’ny mpandrindra an-tsehatra sy ny mpampiakanjo ary ny mpanao ny ravaka ny nampifanaraka ny tantara amin’ny zava-misy ankehitriny. Tsy tranga taloha fa mbola fandre amin’izao fotoana izao, rahateo, ny votoatin’ny tantara.
Raha tsiahivina, ity fampisehoana an-tsehatra ity no nentin’ny tropy Jeannette nanokafana ny fanamarihana ny tsingerin-taona faha-90 nijoroany. Tsy hijanona hatreo fa hifanesisesy ny hetsika samihafa hanasongadinana izany, hatramin’ny volana jona 2020. Marihina fa talohan’izao fankalazana tsingerin-taona izao, tsy nitsahatra namelo-maso ny teatra malagasy ny fikambanan’ny mpanao teatra (FMTM), tarihin’i Mbato Ravaloson, izay ao anatin’ny tropy Jeannette.